Nin lagu tilmaamay geesi oo ka hor tagay ninkii dadka ku laayey Masaajida dalka New Zealand… – Hagaag.com
Posted on 17 Maarso 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Cabdulcasis waa 48 jir ka mid ahaa muslimiintii ku tukunaysay mid ka mid ah masaajidyadii dalka New Zealand ee uu weeraray ninka u dhashay dalka Australia kuna dhinteen 50 ruux.
Cabdulcasis ayaa ninkii weerarka geystey la dagaalamay kana qaatay qorigii uu ridayay waxana uu ku qasbay inuu Tarrant oo ahaa ninkii weerarka geystey inuu cararo oo uu qori kale kala soo baxo baabuurkii uu watay.
Ninkan Geesiga ah ayaa qorigii uu ka qaatay dilaaga waxaa uu ku foorariyay dilaaga oo markaa qori kale kala soo baxay gaarigiisa balse rasaas kuma jirin qoriga uu qaatay Cabdulcasiis, waxana uu qorigii sida fallaarta oo kale ugu tuuray dilaaga.
Intaas kadib ayaa la sheegay inuu dilaaga naftiisa u baqay waxana uu ku baxsaday gaarigiisii,hase yeeshee Cabdulcasis ayaa ka daba cararay gaarigii illaa uu ka mirqay.
Cabdulcasis ayaa diiday inuu yahay nin halyey ah oo badbaadiyay dad badan waxana uu sheegay inuu gutay waajib saarnaa isagoo tusaale u soo qaatay in dadka badbaaday ay ku jireen afar wiil oo uu dhalay kuwaasoo ka mid ahaa dadkii masjidka ku tukunayay.
Hase yeeshee kahor inta uusan geesigan ka soo jeeda dalka Afghanistan ka hortagin ninkan dilaaga ayaa waxaa rasaastii uu riday ku geeriyootay toddobo ruux balse waxaa ka badbaaday siddeetan ruux oo ka mid ahaa dadkii ku tukanayay masjidka.
Sidoo kale waxaa laga soo weriyey Masjid Alnoor oo ay ku dhinteen 42 ruux in mid ka mid ah dadkii ku tukanayay masaajidka uu la qabsaday qoriga ninka dilaaga ah balse dhaawacyo ay soo gaareen awgii uu u geeriyooday.